Usefudukela phesheya kwezilwandle uZahara | News24
Usefudukela phesheya kwezilwandle uZahara
Duaban - Usefudukela phesheya kwezilwandle umculi waseNingizimu Afrika uZahara, njengoba ezosayina ngaphansi kwe-Universal Music yaseLondon, e-United Kingdom, okuyiyona asezoqopha ngaphansi kwayo.
Lo mculi udalule lezi zindaba engxoxweni ekhethekile abe nayo neLANGA LangeSonto.
Kuzokhumbuleka ukuthi leli phephandaba libikile ngeSonto eledlule ukuthi ngoMsombuluko uZahara, ogama lakhe langempela nguBulelwa Mkutukana, ubezohlangana nezikhulu zale nkampani, ebezivela phesheya kwezilwandle.
Kuleli sonto ukuqinisekisile kuleli phephandaba ukuthi umhlangano wabo uhlalile, kwakhona abavumelana ngakho kodwa wathi sekusele ukuba basayine ngokusemthethweni.
Nokho akukacaci ukuthi uzosayina nini nale nkampani, nokuthi uyifulathela nini iNingizimu Afrika.
Lo mculi usanda kuba sematheni ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi uyilaxazile inkampani abeqopha ngaphansi kwayo iTS Records.
Ngesikhathi ekhuluma naleli phephandaba ngeledule uthe akasazimisele ukuphathwa kodwa usefuna ukukhula akhulise nenkampane yakhe iZahara Amry. Uze wathi ngisho nakuyo i-Universal Music uzovuma kuphela uma izosebenzisana nenkampani yakhe, hhayi nje uma ifuna ukumthatha imenze iciko layo.
Ubuye washaya unqimphothwe ngesinqumo sakhe, wathi lesi sinqumo usihlalele phansi, wabona ukuthi kuzomvulela amathuba ukuyohlala eLondon.
Uthi ubona sengathi usekwenze kwanele uNkulunkulu abefuna akwenze eNingizimu Afrika. Uqhuba athi uziqoqe zonke izindondo owayephupha ngazo, waba namarekhodi angakaze aphulwe muntu futhi akaboni ukuthoi ukhona osazowaphula njengamanje.
"Ngifuna ukuphula irekhodi lami mina ngoba kunzima ukuthi kubekhona umuntu ongaliphula. Ukuya kwami eLondon kuzongisiza kakhulu ekuqhubekeni nomlando wami," kusho uZahara.
OLUNYE UDABA: Uhulumeni usebenzise u-R42m ukuthenga izimoto zikanokusho - DA
Inkampani yakhe iZahara Army uthi yona izosebenzisana ne-Universal Music yalapha eNingizimu Afrika, uthi yiyo ezosabalalisa umculo wakhe.
Le ntokazi iphinde yakhala nangokuhlukumezeka abhekane nakho, yathi sekunesikhathi eside ithule.
"Okungithusayo ukuthi abantu bawuthenga ubuthaphuthaphu umculo wami kodwa baphinde basabalalise zonke izinto ezimbi ngami, lokhu kungishiya nemibuzo," kusho yena.
Uphinde watshela leli phephandaba ukuthi yena akenziwanga muntu waba yilokhu ayikho namhlanje, kodwa wenziwe nguNkulunkulu.
"Mina ngasuka emakhaya ngakithi e-East London ngiziculela vele - akekho umuntu owangifundisa umculo, ngakho-ke akekho ozoma endleleni yami athi wangifundisa umculo," kubhobla uZahara.
Utshele leli phephandaba ukuthi ubudlelwane bakhe nabaphathi bakhe bakudala uTK Nciza kanye noSbu Leope abonakele. Uthe akafuni ukwenza amaphutha enziwa ngabanye ozakwabo abashiya kudala kule nkampani. Yize noma ezolibangisa kwezilwandle phesheya kodwa uthe ngeke ayeke ukusebenza noRobbie Malinga.
UZahara uzoba nomhlangano phesheya kwezilwandle lapho eseyoqinisekisa isivumelwano sokusebenza kwakhe ne-Universal Music.